ပျော်ရွှင်မှူ အဆင့်မြှင့် တင်ကြစို့ - SANTHITSA
သင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှူ ကို အဆင့်မြှင့် တင်နိုင်မယ့် အလွယ်ဆုံး နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေ ကြည့်ကြတဲ့အခါ နောက်ဆုံးပေါ် လေ့လာ တွေ့ရှိမှူ အချို့ကို တွေ့ရှိခဲ့ ကြတယ်လို့ ပညာရှင်များက ဆိုထားပါတယ် ။
ပျော်ရွှင်ဖို့ အတွက် ဘယ်လို နည်းလမ်းတွေက ထိရောက်မယ်လို့ သင် ထင်ပါသလည်း ။ သင်ထင်ထားတာထက် ပိုမိုလွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိနေတယ် ဆိုရင်….
သင် ယုံနိုင်ပါ့မလား အလျှင်စလို နိုင်တဲ့ စိတ်ခံစားချက် ရှိတာကြောင့် သင့်ကို ပိုပျော်ရွှင် စေနိုင်ပါတယ် ။ ပင်ဆယ်ဗေးနီးယား တက္ကသိုလ်ရှိ သိပ္ပံပညာရှင် တွေ ရဲ့လေ့လာချက်အရ တစ်နေ့ တာလုံး နာရီကို မကြာခဏ စောက့်ကြည့်လေ့ ရှိတဲ့ သူတွေဟာ အချိန်နာရီ အပေါ်မှာ စိတ်ခံစားမှူ မထား သူတွေထက် စိတ်ခံစား ကျေနပ်မှူ သိသိသာသာ မြင့်တက် နေတာကို တွေ့ရှိ ရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် ။
နာရီကို အမြဲသတိတရ စောင့်ကြည့်တတ် သူတွေဟာ ၂၄ နာရီ ကျော်ချိန်ထိ စိတ်ကျေနပ်မှူအဆင့် သိသိ သာသာ မြင့်တက်နေတာကို တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
အချိန်ကို အလေးထား ခြင်းမျိုးလည်း ဖြစ်တာကြောင့် မိမိ လုပ်ရမဲ့ အလုပ်အပေါ် ပိုအာရုံစိုကိမိပြီး ပိုမိုပြီးမြောက်တဲ့ အတွက် ပျော်ရွှင်မှူ ရရှိတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
မိမိတို့ရဲ့အရင်အချိန်က ရိုက်ထားခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံဟောင်းတွေကို ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ အချိန်ရဲ့ တန်ဖိုးကိုလည်း သိလာမှာဖြစ်ပါတယ် ။ အလုပ်မှာခေတ္တအနားယူပြီး အရင်က ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်တစ်ခုကို ဖွင့်ကြည့်ခြင်းဟာ မိမိရဲ့အရင်အချိန်တွေနဲ့ ငယ်စဉ်ဘဝကို ပြန်လည် မြင်ယောင်တမ်းတ ပြီးကြည်နူးမှူကို ရရှိနိုင်ပါတယ် ။
စိတ်ဖိစီးမှူ ကင်းစင်ပြီးစိတ်ခံစားမှူပိုမိုကောင်းမွန်ကာသင့်ရဲ့အမြင်တွေကိုလည်း ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ် ။
အိမ်ထဲမှာအနေများသည် ဖြစ်စေ အလုပ်ကနေအိမ် အိမ်ကနေအလုပ် အမြဲဖြစ်နေကြ သူတွေဟာ အချိန် ကြာလာတဲ့အခါ စိတ်မပျော်မရွှင် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ အခါမျိုးမှာ အပြင်ထွက်ပြီးငါးမိနစ်ခန့် လမ်းလျှောက်ပေးပါ စိတ်ခွန်အားကို ပိုမိုမြင့်တက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
ဗြိတိန်နိုင်ငံပညာရှင် အချို့ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက် အရ အပြင်မှာ ငါးမိနစ်ခန့် လမ်းထွက်လျှောက်ရုံနဲ့ ပျော်ရွှင်မှူ အဆင့် ၅၀ ရာခိုင်နှူန်းထိ မြင့်တက်လာပါတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ် ။ သဘာဝ လောကနဲ့ ထိတွေ့မှူဟာ စိတ်ခံစားမှူကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေပြီး တက်ကြွ ရွှင်လန်းမှူကိုရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်း သစ်ပင်ပန်းမာန်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါဦးနှောက်ရဲ့ တိုးတက်မှူအစိပ်အပိုင်းတွေပိုမိုကောင်းမွန်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆိုထားပါတယ်။
မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းတွေပေါ်မှာ ခြေဗလာနဲ့လမ်းလျှောက်ပါ။နုညံ့ လန်းဆတ်တဲ့စိတ်ခံစားမှူကိုရရှိပြီး ပျော်ရွှင်လာပါလိမ့်မယ်။ နုညံတဲ့ကော်ဇောနဲ့ထိတွေ့သလို ခံစားရပြီး ပျော်ရွှင်မှူသင်္ကေတဟာ စိတ်ခံစားမှူကောင်းစေတဲ့ နာ့ဗ်ကြောကတစ်ဆင့် ဦးနှောက်အစိပ်အပိုင်းဆီကို ရောက်ရှိသွားစေတာပဲဖစ်တယ်လို့ပညာရှင်များကဆိုထားပါတယ်။
သင့်မှာ စိတ်ဖိစီးမှူတွေနဲ့မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေ ပြီဆိုရင် အခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ အလွယ်ဆုံးနည်းတွေကို စမ်းသပ်ကြည့်ပြီး စိတ်သက်သာမှူကို အရယူလိုက်ပါ။
ပြျောရှငျမှူ အဆငျ့မွှငျ့ တငျကွစို့
သငျ့ရဲ့ပြျောရှငျမှူ ကို အဆငျ့မွှငျ့ တငျနိုငျမယျ့ အလှယျဆုံး နညျးလမျးတှကေို ရှာဖှေ ကွညျ့ကွတဲ့အခါ နောကျဆုံးပျေါ လလေ့ာ တှရှေိ့မှူ အခြို့ကို တှရှေိ့ခဲ့ ကွတယျလို့ ပညာရှငျမြားက ဆိုထားပါတယျ ။
ပြျောရှငျဖို့ အတှကျ ဘယျလို နညျးလမျးတှကေ ထိရောကျမယျလို့ သငျ ထငျပါသလညျး ။ သငျထငျထားတာထကျ ပိုမိုလှယျကူတဲ့ နညျးလမျးတှေ ရှိနတေယျ ဆိုရငျ….
သငျ ယုံနိုငျပါ့မလား အလြှငျစလို နိုငျတဲ့ စိတျခံစားခကျြ ရှိတာကွောငျ့ သငျ့ကို ပိုပြျောရှငျ စနေိုငျပါတယျ ။ ပငျဆယျဗေးနီးယား တက်ကသိုလျရှိ သိပ်ပံပညာရှငျ တှေ ရဲ့လလေ့ာခကျြအရ တဈနေ့ တာလုံး နာရီကို မကွာခဏ စောကျ့ကွညျ့လေ့ ရှိတဲ့ သူတှဟော အခြိနျနာရီ အပျေါမှာ စိတျခံစားမှူ မထား သူတှထေကျ စိတျခံစား ကနြေပျမှူ သိသိသာသာ မွငျ့တကျ နတောကို တှရှေိ့ ရတယျလို့ဆိုထားပါတယျ ။
နာရီကို အမွဲသတိတရ စောငျ့ကွညျ့တတျ သူတှဟော ၂၄ နာရီ ကြျောခြိနျထိ စိတျကနြေပျမှူအဆငျ့ သိသိ သာသာ မွငျ့တကျနတောကို တှရေ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ ။
အခြိနျကို အလေးထား ခွငျးမြိုးလညျး ဖွဈတာကွောငျ့ မိမိ လုပျရမဲ့ အလုပျအပျေါ ပိုအာရုံစိုကိမိပွီး ပိုမိုပွီးမွောကျတဲ့ အတှကျ ပြျောရှငျမှူ ရရှိတာ ဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ ။
မိမိတို့ရဲ့အရငျအခြိနျက ရိုကျထားခဲ့တဲ့ ဓာတျပုံဟောငျးတှကေို ပွနျကွညျ့တဲ့အခါမှာ အခြိနျရဲ့ တနျဖိုးကိုလညျး သိလာမှာဖွဈပါတယျ ။ အလုပျမှာခတ်ေတအနားယူပွီး အရငျက ဓာတျပုံအယျလျဘမျတဈခုကို ဖှငျ့ကွညျ့ခွငျးဟာ မိမိရဲ့အရငျအခြိနျတှနေဲ့ ငယျစဉျဘဝကို ပွနျလညျ မွငျယောငျတမျးတ ပွီးကွညျနူးမှူကို ရရှိနိုငျပါတယျ ။
စိတျဖိစီးမှူ ကငျးစငျပွီးစိတျခံစားမှူပိုမိုကောငျးမှနျကာသငျ့ရဲ့အမွငျတှကေိုလညျး ပွောငျးလဲသှားစနေိုငျပါတယျ ။
အိမျထဲမှာအနမြေားသညျ ဖွဈစေ အလုပျကနအေိမျ အိမျကနအေလုပျ အမွဲဖွဈနကွေ သူတှဟော အခြိနျ ကွာလာတဲ့အခါ စိတျမပြျောမရှငျ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ ။ အဲ့ဒီ အခါမြိုးမှာ အပွငျထှကျပွီးငါးမိနဈခနျ့ လမျးလြှောကျပေးပါ စိတျခှနျအားကို ပိုမိုမွငျ့တကျလာပါလိမျ့မယျလို့ ဆိုပါတယျ ။
ဗွိတိနျနိုငျငံပညာရှငျ အခြို့ရဲ့လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြ အရ အပွငျမှာ ငါးမိနဈခနျ့ လမျးထှကျလြှောကျရုံနဲ့ ပြျောရှငျမှူ အဆငျ့ ၅၀ ရာခိုငျနှူနျးထိ မွငျ့တကျလာပါတယျလို့ ဆိုထားပါတယျ ။ သဘာဝ လောကနဲ့ ထိတှမေှူ့ဟာ စိတျခံစားမှူကို သိသိသာသာ တိုးတကျစပွေီး တကျကွှ ရှငျလနျးမှူကိုရရှိစမှော ဖွဈပါတယျ ။
မွကျခငျးစိမျးစိမျး သဈပငျပနျးမာနျမြားကိုမွငျတှရေ့တဲ့အခါဦးနှောကျရဲ့ တိုးတကျမှူအစိပျအပိုငျးတှပေိုမိုကောငျးမှနျလာတာဖွဈတယျလို့သိပ်ပံပညာရှငျတှကေဆိုထားပါတယျ။
မွကျခငျးစိမျးစိမျးတှပေျေါမှာ ခွဗေလာနဲ့လမျးလြှောကျပါ။နုညံ့ လနျးဆတျတဲ့စိတျခံစားမှူကိုရရှိပွီး ပြျောရှငျလာပါလိမျ့မယျ။ နုညံတဲ့ကျောဇောနဲ့ထိတှသေ့လို ခံစားရပွီး ပြျောရှငျမှူသင်ျကတေဟာ စိတျခံစားမှူကောငျးစတေဲ့ နာ့ဗျကွောကတဈဆငျ့ ဦးနှောကျအစိပျအပိုငျးဆီကို ရောကျရှိသှားစတောပဲဖဈတယျလို့ပညာရှငျမြားကဆိုထားပါတယျ။
သငျ့မှာ စိတျဖိစီးမှူတှနေဲ့မပြျောမရှငျဖွဈနေ ပွီဆိုရငျ အခုဖျောပွပေးလိုကျတဲ့ အလှယျဆုံးနညျးတှကေို စမျးသပျကွညျ့ပွီး စိတျသကျသာမှူကို အရယူလိုကျပါ။